Lisho ukuthini igama elithi "embili"? Lena ubuhlobo obalulekile phakathi esidlule, zamanje nezesikhathi esizayo, lapho izakhi odlule zigcinwa bese uyiswa njengamanje. Ngosizo phambili ezizukulwaneni ngezizukulwane lidlule isiko nomndeni, yokungafani kwamasiko, ngetenhlalo nemagugu.
Heritage - isixhumanisi ezingabonakali phakathi inzalo. Kuhle kakhulu ukuqhathanisa usosayensi kwaholela uVladimir Yakovlev, ngubani sootnos isizukulwane kusukela amagagasi olwandle. Wathi uma iqhathaniswa umlando izilwandle zomhlaba futhi zonke umuntu iconsi olwandle, isizukulwane kulokhu kuyoba amagagasi olwandle. Ziyakwazi ezisheshayo, ukuhlaselwa nokuseshwa kwemizi nomunye, vuka okusezingeni eliphezulu, bese ngokushesha awe phansi. Futhi ngakho ngokuphindaphindiwe. Futhi empilweni. Isizukulwane esikhundleni enye, kodwa okufanayo "ocean" touch kusiza ukudlulisela amagugu ezibaluleke kakhulu futhi kubalulekile esuka kubantu eyodwa kuya kwenye. Ngeshwa, Dynamics ekukhuleni komphakathi ikude phambili kungenzeka ngokulandelana indlela.
Inkinga ye-ukulandelana izizukulwane ifihlekile entuthukweni zanamuhla kwezobuchwepheshe. Cabanga ngesibonelo sika-isijeziso sabazali. Emashumini eminyaka ngaphambili umntwana enze isenzo esibi - libuhlungu unguye ntekenteke kuye. Khona-ke Ufika abathethise kubazali bakhe. Ngoba ikusasa, wayezokwazi ukuthi ayewenzelé kabi, ngakho ukwenza isikhathi eside. Manje kufika zobuchwepheshe, amaphilisi kanye amafoni izingane ngokushesha ukuqonda yonke imininingwane ukuthi Inthanethi inikeza.
Ngeshwa, abantu abangaphezu kwengxenye lokho ingane ubona kumasayithi ahlukahlukene - ifilimu okuqhubekayo. Ubuchopho elele ulwazi mayelana yilokho ezakubona amehlo akhe, kodwa ukuchaza ezimbi kangakanani, kukhona nje akekho. Futhi lapho umntwana owenza into eyesabisa, into wafundiswa ukuba upheqa kwi-Inthanethi, ngeke bakwazi ngisho ngokushesha aqaphele lokho eyayikufunda amthethise. Esebonile ukuthi lokhu, ngakho-ke nawe ungaphumelela. Esinye isibonelo esiphawulekayo lokhu kuthambekela angasebenza isiko njengendlela subculture. Kukhona kubonakala kahle ngezinye izikhathi mbumbulu izimpumputhe zabantu abasha into wavuselwa isikhundla the izindawo ethandwa kakhulu. Njalo Goth yesibili abakwazi ukuchaza ukuthi kungani bakhathale ngakho futhi kungani eduze lezi imibala, into esemqoka - ukulandela abangane bakho.
Uma sicabangela le nkinga kabanzi, esingaziletha amaqembu elandelayo. Izinga loshintsho ezinkulu kwezenhlalo kufanele kuhle ukufanisa ijubane ushintsho izizukulwane. Umlando ubonisa ukuthi izinguquko ezinkulu emphakathini eze ngokuphila izizukulwane ezintathu - izingane, obaba, omkhulu. Lokho, ngamanye amazwi, ukusuka kwenye amagugu omphakathi namanye amasiko Kwenziwa phakathi izizukulwane ezintathu izihlobo - kumkhulu nogogo nakubazali abazukulu.
Ngaphezu kwakho konke, ku esigabeni sokuqala, ukuzalwa umbono, esigabeni sesibili kungabonwa isizukulwane ukuphinda uqeqesho, kanye kuphela eyesithathu - ukwamukelwa of zengqondo entsha. Yiqiniso, phakathi nalesi sikhathi izinguquko eziningi, kodwa hhayi kakhulu kangaka ukuthi izizukulwane ezintsha awunaso isikhathi ukujwayela. lithathelwe ngempumelelo ompompi isiqondiso ukungqubuzana izimo ezivukayo ukungaqondi elula. Izibonelo zalokhu kungaba engapheli - ukuntuleka isiko ibhasi, lapho amachwane ukwenza nenkani sengathi angikho ukuqaphela indoda imi eduze ngilixhegu, kuya luhlata banal - lapho, ephendula amazwana ngu ngingowokuqala ungezwa Inkulumo nokuthuka ukuthi obani kakhulu kunaye.
Ukuqhubeka zezizukulwane - kuba isiphetho esisodwa uhlobo oluthile hhayi kuphela. Ungase ucabangele isibonelo ebanzi - abantu imfundo Soviet (USSR) - CIS - futhi le nkathi (abaseRussia).
Kutfutfukiswa entuthukweni yezobuchwepheshe namuhla ngesivinini Amazing, ethula ubuchwepheshe obusha, okuyiwona eSoviet isikhathi abantu ukugcina cishe kungenakwenzeka. Ubani phakathi abadala namuhla ungumnikazi ikhompyutha okungenani indlela uyakwazi abafundi esikoleni samabanga aphansi? Futhi kuthiwani amadala yobudala baseRussia! I-Nanotechnology ngokushesha ukudala amasu amasha, bayanda lula izimpilo zezakhamuzi. Nokho, kuwufanele ukukhumbula ukuthi ukulandelana izizukulwane inikeza izisekelo zokuziphatha zabantu zanamuhla. Kodwa ngokuvamile kubangelwa kokuma amadala kuba ubudlova ozalwa yokuntuleka banal okuqonda. Wakhulela umoya izakhamuzi khulula, intsha bakholelwa ukuthi wazi konke, ngisho ngakho ngaphezulu kwaziphi izimo, futhi kanjani kufanele athathe isinyathelo. Ngakho-ke, iyiphi kumazwana kusuka abaphezulu uthathwa njengomgcini inqubo eyisicefe zemfundo. Kwaba kamuva kakhulu, hhayi kuzo zonke izimo, kufika ukuqonda ukuthi ufuna okuhle kuphela futhi enye into ngempela ukushintsha ube umuntu ongcono.
Ochwepheshe kwezikhungo ezahlukene yesayensi lwenziwe ucwaningo nje isizukulwane esisha - ukuthi nakho omkhulu ngempela ezibalulekile kubantu abasha. Phendula Iningi labo lalilisha: embili - ukuhlobana phakathi izizukulwane, ngakho into esemqoka - kungcono uthando abazali nezindinganiso zomkhaya.
Ibe isilandelwa kukhona ingcebo ukulondeka ngokwezinto ezibonakalayo. Bese - kusuka kwezinkulu kwehle: uthando, ukuthembeka, isifiso sokuvelela, umthwalo, imfundo, ukukhuthala, Inhlonipho, umusa, ukuzimela, ukuthula, nokushisekela izwe lakithi. Ekugcineni, umphumela kwakukuhle. Nokho, ukushisekela ubuzwe, ngawo intsha namuhla uhlala ezweni khulula (ukhuluma ngani ngokuthi yiMpi Enkulu Yobuzwe), kuphela indawo yokugcina wayephakathi zokuziphatha eziyisisekelo. Kodwa ingcebo nokulangazelela ukwenza imali eningi - olwesibili, ngokushesha ngemva umndeni. Abahlupheka amasiko, okuyinto cishe wathi akekho yini.
Njengoba kuboniswa inhlolovo, ngokuqhubeka phakathi izizukulwane zesikhathi amaSoviet nasemakamu Russian wazibonakalisa buthaka kakhulu. Ukuhlonipha isiko labantu bayo, umlando, uthando lwezwe - konke lokhu kude kakhulu intsha yesimanje. Namuhla kukhona ukukhuthazwa asebenzayo we ukuphila khulula, liphefumulelwe abezindaba izakhamuzi zakwamanye amazwe izibonelo.
Kakade namuhla singaba ngokucacile umkhondo ukuthi nokuziphatha nasezimisweni zokuziphatha kubantu abasha ezweni lethu - umqondo ezikude kakhulu futhi ngokuphelele alien. Awukwazi ukukhuluma ngazo zonke kodwa kwezizukulwane ezimbalwa yezingane kanye intsha manje liye lalishaya indiva ukuqhubeka izizukulwane, ngokukhetha ngendlela yakhe, sithembele abanye abantu, hhayi ngempela amasiko. Lesi sikhundla kudala izimiso entsha ngokuphelele ethize okwagcina kungaholela ukuphazamiseka ubuqotho ezweni lethu.
Izinto eziyinhloko ezikhathazayo zabantu abasha namuhla
Ngokusho kwenye kwenziwa ucwaningo lwembulunga yonke enikelwe izinkinga ukuphokophela, isimo namuhla kanje. Iningi of intsha yanamuhla obakhathalelayo wenzuzo kwamanani, nangemva - ukuntuleka kwezimo ezivamile ngoba imfundo kanye nokunakekelwa kwempilo. Abangaphezu kwesigamu kwaba esivuna yokuthi inkinga acute kuleli zwe kuyicala, futhi cishe nabantu abaningi wabelane umbono wokuthi ubuphekula imele belingana ke. Othile bakhumbula ukuthi intsha akudingeki umbono wabo siqu kazwelonke, kanye neqiniso lokuthi ngenxa nomphumela olimazayo impilo esizukulwaneni esisha imikhuba kukhona sincipha ngokushesha kwenani labantu. A ahlukene umugqa baphikisane nezinye izinkolo, ukuntula ingokomoya nokwehliswa ezikhulayo ahlukanisa. Isixazululo main ukuba lezi zinkinga inombolo encane intsha neyaziwayo kulondolozwe ngokuqhubeka izizukulwane.
yakhe ezibaluleke kakhudlwana
Kusukela imiphumela yocwaningo letinikwe lapha ngenhla, ungenza isiphetho esidumazayo - izinkinga lomuntu siqu oluhlobene nezindaba kumuntu othile, iphakeme kakhulu kunanoma izithakazelo ezivamile. Abantu abasha akanandaba kumiswa isizwe esiyingqayizivele, ukuze baxazulule izinkinga zabo. Lapha kungabonwa ekulahlekelweni elikhanyayo zezimiso kufanele azise ngokuqhubeka izizukulwane. Nakuba singeke sikwazi ukukhuluma ngakho ngakho ngoyebo. Kubuka abafundi esikoleni esiphakeme futhi esiphakeme, singasho kugcwale abagomela ngokuthi ikhanyisa kakhulu amanothi ka ngetenhlalo nemagugu emasiko, lolo ngesikhathi sokuhlwanyelwa kuhlulekile ukuwudlulisela dlule zukulwane. Abaningi ukuthola imisebenzi udumo ezifana aminyene flashmob isinyathelo kuphelelwe ngamaholide, intela le Mpi Enkulu futhi labo Kusengenzeka namuhla sibongela yena.
Sengiphetha, ngifuna ukukhumbuza futhi: ngokuqhubeka izizukulwane - intambo ezingeke zephuke kungcono isixhumanisi kufanele kugcinwe. Kumele akwazi ukugcina lokho lenziwe ukuthi okhokho kanye izinqubo lobuchwepheshe wahamba njengoba ngokushesha futhi imfundo zokuziphatha zabantu bakithi. Ukuqhubeka zezizukulwane - uhlobo ijika, ne nezinkinga zawo, kodwa akungabazeki, wathuma kanye nabo ups elandelayo.
Kubalulekile ukukhumbula ukuthi uma abantu abahlala kwelinye izwe kuyoba lwemibono leyehlukene - kuyofana letitfombe esihlabathini ukuthi kungenziwa wageza kalula kude futhi wawela amagagasi. Ngaphandle imibono emaphakathi kukhona yalutho noma yiziphi izinguquko zenhlalo, kwezombangazwe nakwezomnotho. Kukhona njalo umuntu muhle, kodwa enye - okuyinto embi.